LifeStyle Archives - TGuff
Sun Jul 150Comments
कर्म अजमाउन अमेरिकामा रहेका नेपाली यतिबेला सुन्दर युवती छान्दैछन्। जर्ज म्यानसन युनिभर्सिटीको जोन्सोन सेन्टरमा ११ अगस्टमा हुने मिस नेपाल युएसए दोस्रो संस्करणले यो वर्षका लागि नेपाली समुदायकी सुन्दरी छान्नेछ। प्रतियोगिताका लागि २८ युवती तयार छन्। कस्ता छन् त अमेरिकाका नेपाली सुन्दरी ? फोटो फिचर र भिडियो हेर्न भित्र आउनुहोस्।
दशैँ न हो। कसले छोड्छ र ! हामेरु नि मनाउछौं भव्यसँग। आज अस्टमी धेरैका घरमा खशी काटिए। कुनै बेला मसँगै स्कूल पढ्ने नारदको घरमा खुकुरी बिहानैदेखि दलिनमा थियो। काटे होलान्। गाउँमा धेरै युवा यही दशैँका लागि त घर फर्किएका छन्। टन्न मासु खान, म्यारिज खेल्न अनि सर…सर… लिङ्गे पिङ मच्चाउन। म नि के कम ? […]
रिजर्भ गरिएको एउटा महिन्द्रा जीप ढिमुवा (पर्वत)बाट हाइवे छाडेर तिल्हारको उकालो लाग्दा मेरा आँखा हरियो जंगल र अग्ला पहाडसँग बरालिरहेछन्। मन प्रशन्न भए पनि शरीरलाई सञ्चो छैन। संविधानसभाको मिति थप्ने दिनदेखि रुघा, खोकी ज्वरोसँगै स्वर यसै भासिएको छ। तैपनि पुस्तकालय सञ्चालनको मिति पछि नसार्न जिद्धि कस्दै हिँडेको; पहाडको शुद्ध अक्सिजन लिने अवसर मिल्यो। निलो आकास […]
पूर्णिमाको पूर्णचन्द्रमा टहटह चम्किरहेछ। छतमा निस्केर म काठमाडौं सहरतिर आँखा घुमाइरहेछु। चन्द्रमा जति जति पश्चिमतर्फ सर्दै गइरहेछ बोधिमण्डलको वातावरण त्यति शान्त र मनोरम हुँदै गएको छ। ५ वर्षपछि क्यालेन्डर फेरिँदा म यो पटक केही बढी नै शान्त थिएँ। १७ मे २००६। धम्मश्रृङ्गमा म पहिलो पटक ध्यान गर्दै थिएँ। रमाइलो संयोग त्यही मितिमा आज बुद्धपूर्णिमा परेछ। […]